Masoivoho japoney: nanorina trano fitsaboana sy fianarana | NewsMada
Masoivoho japoney: nanorina trano fitsaboana sy fianarana
Nahazo fotodrafitrasa roa, samy iankinan’ny fiainan’ny mponina, ny any Antsiranana, noho ny fanohanan’ny governemanta japoney. Tsy inona izany fa trano lehibe fitsaboana, ao amin’ny CHU Place Kabary, sy trano fianarana ho an’ny EPP ao Betahitra. Notontosaina, ny alakamisy teo, ny fitokanana ireo trano roa ireo ary notronin’ny ambasadaoro japoney eto amintsika, i Ichiro Ogasawara.
Mitentina 71 752 euros na manodidina ny 228 tapitrisa Ar ny saran’ny fanorenana ilay trano fitsaboana, izay tena zava-dehibe satria, hatramin’izay, miisa telo ihany ny efitrano fitsaboana ao amin’io CHU io.
Isan-taona anefa, miisa 5 000 eo ho eo ny olona tsaboina ao. Marihina fa ahitana efitrano fitsaboana miisa telo, trano ho an’ny sampana fitsaboana maso, iray hafa ho an’ny ORL, laboratoara ary trano ho an’ny « service de rééducation », ity trano lehibe vaovao ity. Noho ity fotodrafitrasa vaovao ity, afaka mandray marary manodidina ny 7 000 ny CHU ao Antsiranana.
Eo amin’ny sehatry ny fampianarana kosa, nitarina ny EPP ao Betahitra, Cisco Antsiranana II, ka mitentina 53 405 euros na 194 tapitrisa Ar eo ho eo ny saran’izany. Betsaka ny ankizy mianatra ao amin’ity sekoly ity. Roa ihany anefa ny efitrano ka miisa 160 ny ao amin’ny efitrano iray. Ho famahana io olana io indrindra ny antony nanohanan’ny masoivoho japoney izao tetikasa fanitarana izao.
Ahitana efitrano fianarana miisa telo ny trano lehibe vaovao. Miampy birao sy trano famakiam-boky ary trano fivoahana izany. Ankoatra ireo, nahazo ordinatera, « panneaux solaires » ary fitaovana samihafa koa ny sekoly.